Izizathu ezi-7 zokuCoca uLuhlu lwakho lwe-imeyile kunye nendlela yokuCoca ababhalisile | Martech Zone
Izizathu ezi-7 zokuCoca uLuhlu lwakho lwe-imeyile kunye nendlela yokuCoca ababhalisile
NgoMvulo, Matshi 19, 2018 NgoLwesine, Septemba 24, 2020 Douglas Karr
Sijolise kakhulu kwintengiso ye-imeyile kutsha nje kuba sibona iingxaki ezininzi kolu shishino. Ukuba isigqeba solawulo siyaqhubeka ukukukhathaza kuludwe lwakho lwe-imeyile, kufuneka ubakhombise kweli nqaku. Inyani yile, enkulu kwaye indala uluhlu lwakho lwe-imeyile, okona kungangumonakalo onokubakho kwintengiso yakho ye-imeyile. Kuya kufuneka endaweni yoko ujonge bangaphi ababhalisile osebenzayo onoluhlu lwakho -Cofa okanye uguqula.
Izizathu zokuCoca uLuhlu lwakho lwe-imeyile
Ubume -I-ISPs ibhloko okanye ubeke i-imeyile yakho kwifolda ye-junk esekwe kubungqina bokuthumela i-IP. Ukuba uhlala uthumela kwiidilesi ezimbi ze-imeyile, iya kuchaphazela igama lakho.
Ingxelo egxekekileyo kwezamatyala -Ukuba igama lakho lihlwempuzekile ngokwaneleyo, yonke i-imeyile yakho inokuvalwa.
Ingeniso -Ukuba uninzi lwee-imeyile zakho luzenza kwibhokisi engenayo enababhalisi abasebenzayo, oko kuyakuvelisa ingeniso engaphezulu.
ixabiso -Ukuba isiqingatha sayo yonke i-imeyile yakho siza kuya kwiidilesi ze-imeyile ezingasekhoyo, uhlawula kabini into ekufuneka ubenayo kumthengisi we-imeyile. Ukucoca uluhlu lwakho kuya kunciphisa iindleko zakho ze-ESP.
Ujoliso -Ngokuchonga ababhalisile bakho abangasebenziyo, ungathumela ukubonelelwa kokuphinda ubandakanyeke ngokuthe ngqo kubo, ujolise kubo kwimidiya yoluntu, kwaye ubone ukuba ungababambisa kwakhona.
ubudlelwane -Ukuba noluhlu olucocekileyo, uyazi ukuba ubandakanyeka nababhalisi abakhathalayo ukuze ukwazi ukujonga ngcono imiyalezo yakho.
Ukubika -Ngokungakhathazeki malunga nobungakanani boluhlu kwaye ugxile kuthethathethwano, unokufumana idatha echanekileyo ngakumbi malunga nendlela ezisebenza ngayo iinkqubo zokukhulisa kunye ne-imeyile.
Sincoma amaqabane ethu kwi-Neverbounce yakho inkonzo yokuqinisekisa i-imeyile! I-algorithms yabo yokuthengisa kunye nokuqinisekiswa komntu wesithathu benze umahluko omkhulu ekunikezelweni kwabaxhasi bethu. Ungaze uyekelele unikezela ngesiqinisekiso sokuchaneka kwe-97%. (Ukuba ngaphezulu kwe-3% yee-imeyile zakho ezisebenzayo ziyangxama emva kokusebenzisa inkonzo yethu, baya kubuyisa umohluko.)
Izinto ezingaze zenziwe zibandakanya:
Inkqubo yokuQinisekiswa kwamanyathelo ali-12 Usebenzisa i-MX, i-DNS, i-SMTP, INKONZO, kunye neetekhnoloji ezongezelelweyo ukumisela ubunyani beedilesi, inkqubo yethu yokuqinisekisa amanyathelo ali-12 ikhangela i-imeyile nganye ukuya kumaxesha angama-75 kwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Isixhobo soHlahlelo oluSimahla -Vavanya idatha yakho ngaphandle kwendleko. Siza kunika ingxelo yokuba ngaba kukhuselekile ukuthumela okanye kufuna ukucocwa ngenqanaba lokuhlawula eliqikelelweyo. Njengomthengi weNeverBounce, unokusetyenziswa okungenamda kweli nqaku. Ukongeza, unokwakha uhlalutyo lwasimahla kanye kwinkqubo yakho nge-API yethu ngaphandle kwendleko.
Uluhlu lokuSimahla lokuSusa - I-NeverBounce ibonelela ngokuphinda-phinda simahla kunye nokususwa okungalunganga kwe-syntax ngaphambi kokubonelela ngeendleko ezipheleleyo zomsebenzi wakho. Asisoze sahlawulisa ngokukhuhla.
Abazange basebenzise iiNkcukacha zeMbali -Iimeyile ziyatshintsha rhoqo, kwaye ngelixa uninzi lweenkampani zokuqinisekisa zigcina iindleko ngokubonelela ngeziphumo zembali, siqinisekisa ii-imeyile zakho ngalo lonke ixesha, siqinisekisa impendulo yakutshanje kunye neyona ichanekileyo. Ngexesha elikhawulezayo lokutshintsha kwishishini, awuzukulinda ixesha elide ukucoca kunye nokuqinisekisa uluhlu lwakho.
Hlaziya uluhlu lwakho lwe-imeyile simahla ngoku!
Le infographic evela Iimonki ze-imeyile ikwabonelela ngoluhlu lwamanyathelo oza kuwathatha ukucoca ababhalisile kwaye ucoce uluhlu lwakho lwe-imeyile ngokufanelekileyo.
tags: ababhalisile abasebenzayoukubuyela umvauluhlu lwe-imeyile olucocekileyoukuhanjiswaimeyile ecocekileyoukucoca i-imeyileIindleko ze-imeyileigama le-imeyileIngeniso ye-imeyileulwahlulo lwe-imeyileUmboneleli wesevisi ye-imeyileUmrhumo we-imeyileukuqinisekiswa kwe-imeyileespesp iindlekoababhalisi abangasebenziyococa ababhalisileUkuzibandakanya kwakhona
Kushushu kuna kushushu: Kwaziswa iresiphi eNtsha yeMfihlo yeSauce yokuThengisa kwi-LinkedIn
Ukudlula kwiBlockers: Ungazifumana njani iiNtengiso zakho, ucofa, kwaye usebenze ngazo